health Archives | XYZ NEWS
ယနေ့ခေတ်စားနေသော တို့ဆေးကို ကာကွယ်နိုင်သည့် သံပရာသီး
သံပရာသီး ယနေ့မြို့ကြီးများ၌ခေတ်စားနေသော တို့ဆေး ရှူ ဆေးကို ကာကွယ်နိုင်သည့် သံပရာသီး ! သံပရာသီးကို မူလကတန်ပြန်ရာသီးဟု ခေါ်ကြသည် ဟု သိရပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စုန်း မှင် ကဝေ အမှောင့်ပရောဂ တို့အောက်လမ်းဖြင့် တိုက်ခိုက်လာလျှင် သံပရာသီးကို …
December 2, 2019 By Editorahealth
ကွမ်းယာထဲ ထည့်စားကြတဲ့ နိုင်တီတူး (92) ဘူးပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့စာ
နိုင်တီတူး (92) ဘူးပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့စာ Do not swallow, Notafood product (မြိုမချရ၊ စားသောက်ကုန်မဟုတ်)၊ Do not use as ingredient in any …
November 29, 2019 By Editorahealth
စမတ်ဖုန်းကို အလင်းရောင်အမြင့်ဆုံးနဲ့ ၂ နှစ်ကျော်ကြာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ထိုင်ဝမ်က အမျိုးသမီးတယောက်ဟာ သူ့မရဲ့ မျက်ကြည်လွှာမှာ အပေါက်ပေါင်း ၅၀၀ ဖြစ်ပွားတာအပါအဝင် ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ မျက်လုံးပျက်စီးမှုနဲ့ ကြံုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ OC သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ဆိုးနဲ့ ကြံုတွေ့ခဲ့ရသူက …
November 9, 2019 By Editorahealth
၁။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူ အိပ်ခြင်း အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏ အိပ်စက်သည့်အချိန်သည် သာမန်လူများ အိပ်စက်ချိန်ထက် ပို၍ တိုတောင်းသောကြောင့် သင့်ကို အိပ်ရေးပျက်စေပါတယ်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏ အမွှေးများကလည်း သင်၏ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ၂။ ရေနွေးပူစိမ်ချိုးခြင်း ရေနွေးပူစိမ်ချိုးခြင်းက အိပ်စက်ခြင်းကို …
November 8, 2019 By Editorahealth
November 7, 2019 By Editorahealth
လူတိုင်းဟာ အန်ဆုံးပေါက်ခြင်းကြောင့်နာကျင်ခြင်းကို ခံစားဖူးကြပါတယ်။အံဆုံးဆိုတာ တတိယမြောက် အံသွားကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပြီး အသက်၁၈ကနေ၂၅နှစ်အတွင်း ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်သောအရွယ်မှာ ပေါက်တဲ့သွားမို့ ပညာရှိသွား(wisdom tooth)လို့လဲတင်စားကြပါသေးတယ်။အံဆုံးပေါက်လို့နာကျင်ခြင်းကိုလောလောလတ်လတ်ခံစားနေရသူများအတွက် အောက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းကောင်းလေးတွေက ကူညီပေးမှာ ဖြစ်လို့ဆက်လက်ဖတ်ရှုုကြည့်ပါနော်။ (၁)ဆားပြုတ်ရည် ဆားဆိုတာ သဘာဝပိုးသတ်အာနိသင်ရှိသော ဆေးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆားကို ရေကြက်သီးနွေးမှာခပ်ထည့်ပြီး ထိုအရည်ဖြင့် ပလုတ်ကျင်းပေးပါ။သွားကိုက်ခြင်းနဲ့လည်ပင်းနာခြင်းများကိုလျင်မြန်စွာသက်သာစေပါလိမ့်မယ်။ပလုတ်ကျင်းရာမှာလဲ …
November 6, 2019 By Admin health
စိတ်ဖိစီးမှုတွေ အရမ်းများ နေပြီဆိုတာကို ပြတဲ့ လက္ခဏာများ
နေ့စဉ်လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေကြရသော ၀န်ထမ်းများ၊ကျောင်းသားများမှသည် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ကာယအလုပ်သမားများသာမက အိမ်ရှင်မများပါမကျန် လူတိုင်းလိုလို စိတ်ဖိစီးတတ်ကြပါတယ်။သာမန်စိတ်ဖိစီးမှုမျိူးက အရေးမကြီးပေမယ့် အခုဖော်ပြမယ့်လက္ခဏာတွေရှိနေပြီဆိုပါက သင်ဟာစိတ်ရောလူပါအနားယူသင့်တဲ့ အချိန်ဆိုတာ သိသင့်ပါတယ်။ (၁)ခေါင်းကိုက်ခြင်း သင်အနားယူဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကို သင့်ဦးခေါင်းကတဆင့် ကို်ယ်ခန္ဒာက အချက်ပြပေးပါတယ်။သင့်စိတ်ဖိစီးမှုများပြားနေပြီဆိုပါက ဦးခေါင်း၊လည်ပင်းနဲ့မျက်စိတို့ အပြင်းအထန်ကိုက်ခဲတတ်ပါတယ်။ အလွန် စိတ််ဖိစီးမှုများပြားပါက …
November 2, 2019 By Editorahealth
” အသက်လေးရယ် ရှည်စေလို မန်းတောင်ရိပ်ကိုခို ” ဆိုပေမယ့် အသက်ရှည်စေနိုင်မယ့် အခြားနည်းလမ်းတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ် ။ ဒီနည်းလမ်းတွေကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင် အသက် ၉၅ နှစ်အထိ အသက်ရှည်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ စတန်းဖို့ဒ်မှ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက အတိအလင်းကြေငြာထားပါတယ်။ ဒီတော့ သူတို့အခိုင်အမာပြောထားတဲ့နည်းလမ်းတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ …
October 27, 2019 By Editorahealth
တခါတလေမှာတော့ပိတ်ရက်တွေအိပ်ရာထဲမှာအကြာကြီးနေဖို့အကြောင်းပြချက်ပေးရခက်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်ဒီသုတေသနအပိုင်းအစလေးကသင့်ကိုအကြောင်းပြချက်ဖြစ်စေမှာပါ။ဒီလိုပိတ်ရက်မှာအကြာကြီးအိပ်တာကသင့်အသက်ရှည်စေဖို့အကူအညီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအိပ်ခြင်းကကောင်းပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကြားရက်တွေမှာအလုပ်အကြာကြီးလုပ်ရတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့။ BrightSideကပိတ်ရက်မှာအကြာကြီးအိပ်ရင်ရမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားထားပါတယ်။ပိတ်ရက်မှာအိပ်တာကပိုကောင်းပါတယ် နေ့စဉ်၈နာရီပုံမှန်အိပ်တာကအကောင်းဆုံးလို့ယုံကြပါတယ်။ဒါပေမယ့်လေ့လာချက်တခုအရဒါကအားလုံးမဟုတ်သေးပါဘူး။တကယ်တော့ကြားရက်တွေမှာနည်းနည်းအိပ်ပြီးပိတ်ရက်မှာအကြာကြီးအိပ်တာကအသက်ပိုရှည်စေတာပါ။ေ လ့လာချက်ကအိပ်ချိန်နဲ့သေတဲ့နှုန်းကိုချိန်ကိုက်ပြီးကြည့်ထားတာပါ။ ဒီသုတေသနက၁၃နှစ်အတွင်းမှာနိုင်ငံသေတဲ့စာရင်းအရလူပေါင်း၃၈၀၁၅ကိုလေ့လာပြီးအစုနှစ်ခုခွဲထားပါတယ်။၆၅နှစ်အောက်နဲ့၆၅နှစ်အထက်ပါ။တနေ့ကိုအိပ်ချိန်ပုံမှန်ကတော့ ၆နာရီကနရနာရီကြားပါ။လိင် ကိုယ် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း ရုပ်ပိုငိးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုနဲ့အလုပ်ဆိုင်းတွေကိုလဲထည့်သွင်းစဉ်းစားပါတယ်။ သင်ကအသက်၆၅အောက်ဆိုရင်၅နာရီလောက်ပဲအိပ်ပါ။ဘယ်ရက်မဆိုပေါ့။တညကို၆နာရီရနာရီအိပ်တဲ့သူထက်၆၅ရာခိုင်နှုန်းသေနှုန်းမြန်ပါလိမ့်မယ်။ပိတ်ရက်မှာအကြာကြီးအိပ်တာကသင့်ကိုအသက်ရှည်စေပါတယ်။ သင်ကအသက်၆၅အောက်ဖြစ်ပြီးအိပ်ရတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်သေနှုန်းနည်းမှာပါ။သင်၆နာရီကနေရနာရီလောက်ပုံမှန်အိပ်နေရင်ပိတ်ရက်မှာပိုကြာကြာအိပ်ပြီးသေခြင်းကိုအံတုလိုက်ပါ။ အနည်းဆုံး၈နာရီအိပ်တာကမရှိမဖြစ်လိုတယ်ဆိုတဲ့ဒဏ္ဍာရီကိုပြောင်းလိုက်ပါ။ဒါဆိုအကြာကြီးအိပ်တာပိုကောင်းလား။အဖြေကမဟုတ်ပါဘူး။နေ့စဉ်၈နာရီသို့မဟုတ်ပိုအိပိတာက၆နာရီရ၂၅ရာခိုင်နှုန်းသေဆုံးနိုင်ချေမြင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနေ့အနည်းဆုံး၈နာရီအိပ်ရင်ကျန်းမာတယ်ဆိုတာကိုဆန်​့ကျင်လိုက်ပါ။ ဒါပေမယ့်ရှာဖွေမှုအားလုံးအရအသက်၆၅နဲ့အထက်သူတွေအတွက်တော့အသုံးမဝင်ပါဘူး။အိပ်ချိန်နဲ့သေဆုံးနှုန်းကြားကအဆက်ကသူတို့အတွက်ပျောက်နေပါတယ်။ပထမဆုံးလေ့လာမှုလုပ်တဲ့တော့ဘ်ဂျွန်ကအသက်ကြီးတဲ့သူတွေကဒီအထိရောက်ဖို့လိုတဲ့အချိန်တွေရပြီးသားဖြစ်လို့ဆိုပါတယ်​။ Writer -Min Thu ( YGN Times )
October 26, 2019 By Editorahealth
လေဖြတ်ခြင်းကိုစောစောစီးစီးဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ? လေဖြတ်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိူးတွေကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ? ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်သော WHOရဲ့ ကြေငြာချက်အရ သေစေတတ်သောရောဂါများအနက် လေဖြတ်ခြင်းဟာ တတိယမြောက်ဖြစ်ပါတယ်။လေဖြတ်ခြင်းကို အချိန်မီသိရှိပါက နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိူးတွေမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပေမယ့်လဲ လူတော်တော်များများက အချိန်မီမသိရှိနိုင်တာမို့ စောစီးစွာ ဆေးကုသမှုခံယူချိန်မရလိုက်ပါဘူး။ လေဖြတ်ခြင်းကို …
October 17, 2019 By Editorahealth